सातवटा कारणले अगाडि सार्न सकिन्छ युएससीआईएसमा दिएको आवेदन « Khasokhas Follow @khasokhasmag
सातवटा कारणले अगाडि सार्न सकिन्छ युएससीआईएसमा दिएको आवेदन
प्रकाशित मिति : कार्तिक ११, २०७६ सोमबार
यदि तपाईको आवेदनबारे युएससीआईएसमा लामो समयदेखि पेन्डिङ अवस्थामा छ भने वा युएससीआईएसबाट शीघ्र निर्णय गराउनु पर्ने भएको खण्डमा तपाईले त्यस्तो अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईको अनुरोधपछि युएससीआईएसले हरेक आवेदनलाई होसियारीपूर्वक हेरेर त्यसबारे निर्णय लिन्छ ।
विभिन्न सातवटामध्ये एउटा क्राइटेरिया मिलेको खण्डमा युएससीआइएसले तपाईको आवेदनबारे शीघ्र निर्णय दिनसक्नेछ । यदि कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई कठोरप्रकारको आर्थिक घाटा भएको खण्डमा त्यस्तो आवेदकले शीघ्र निर्णयका लागि अनुरोध गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै आवेदक असाध्यै बिरामी भएको खण्डमा वा अन्य कुनै आपतकालिन अवस्था आइलागेको खण्डमा पनि आवेदनबारे शीघ्र निर्णय गराउन सकिन्छ । कुनै मानवीय कारणबाट पनि तपाईको आवेदनबारे शीघ्र निर्णय गराउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि तपाईको मुलुकमा कुनै युद्ध वा बिपत्ति आएको खण्डमा तपाईले आफ्नो आवेदनबारे शीघ्र निर्णयका लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ ।
अमेरिकाको सामाजिक र सांस्कृतिक रुची बढाउने खालको कुनै गैरनाफामुलक संस्थाको तर्फबाट पनि आवेदनमा शीघ्र प्रकृयाका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक रुचीको प्रवद्र्धनका लागि संस्थाका तर्फबाट काम गर्नुपर्ने भएमा शीघ्र निर्णय प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै अमेरिकी सरकारको रुचीको विषय भएमा वा रक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेमा पनि आवेदनबारे शीघ्र निर्णय हुनसक्छ । तर त्यसका लागि अमेरिकी सरकारको कुनै निकायले युएससीआईएसलाई औपचारिक रुपमा अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै आवेदनमा युएससीआईएसको गल्तीका कारण ढिलो भइरहेको छ भने पनि शीघ्र प्रकृयाका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कुनै आवेदन युएससीआईएसको रुचीको विषय भएमा पनि शीघ्र निर्णय प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
तर कुनै आवेदनका लागि अतिरिक्त शुल्क तिरेर प्रिमियम प्रोसेस गर्न सकिने प्रावधान छ भने त्यस्ता आवेदनबारे युएससीआईएसले अनुरोधका आधारमा शीघ्र प्रकृयामा लैजादैन । तपाईले अतिरिक्त शुल्क तिरेरमात्र शीघ्र निर्णय गराउन सक्नुहुनेछ ।
अमेरिकामा दिइएको आवेदनमा शीघ्र निर्णय गराउनका लागि तपाईले ८०० ३७५ ५२८३ मा फोन गरेर अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । युएससीआईएसको सम्पर्क केन्द्रले तपाइको अनुरोध युएससीआईएसको सम्बन्धित कार्यालमा पठाउन सक्नेछ । त्यस्तै आवेदकले सर्भिस सेन्टर वा फिल्ड अफिसमा लिखित पत्र पठाएर पनि शीघ्र प्रकृयाको अनुरोध गर्न सक्छन् । इन्फोपास अप्वाइन्टमेन्ट लिएर पनि स्थानीय युएससीआईएस कार्यालयमा गएर शीघ्र प्रकृयाको अनुरोध गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तो अनुरोध स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार भने युएससीआईएससँग रहेको हुन्छ । युएससीआईएसले त्यसका लागि तपाईसँग अतिरिक्त कागजात पनि माग्नसक्छ । शीघ प्रकृयाका लागि अनुरोध गर्दा तपाईको आवेदनबारेको फैसला प्रभावित हुँदैन ।
श्रोत : युएससीआईएस
सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशालीहरुले अमेरिकाको तीनबर्षे कामदार भिसा पाउनसक्ने
सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली रहदै आएका सोसल मिडिया इन्फ्लुयन्सरहरुले पनि अमेरिकाको तीनबर्षको कामदार भिसा पाउनसक्ने कानून
के हो २१४ बी अन्तरगत अमेरिकी भिसा अस्वीकृति? अस्वीकृत भए के गर्ने ?
संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा खुला समाज हो। अन्य थुप्रै देशहरूको विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्थानीय
डिभी २०२२ का डिभी विजेताहरुले अक्टोबर १ देखि अमेरिकाको भिसा पाउने प्रावधान रहेपनि कोही पनि
अमेरिकनहरुलाई जोर्डन, पोर्चुगल र फ्रान्सको यात्रा नगर्न सुझाव, फ्रान्समा आतंकवादी हमलाको खतरा
अमेरिकनहरुलाई जोर्डन, पोर्चुगल र फ्रान्स लगायतका देशको यात्रा नगर्नको सीडीसीले सुझाव दिएको छ । ती